I-OEM & ODM vispring baronet Uhlu Lwamanani Amanani aphezulu | Rayson
Ikhoyili yephakethe lekhoyili ehluma umatilasi usayizi ophindwe kabili omaphakathi oqinile oqinile phezulu Olula oqinile, igwebu lenkumbulo, iphakethe elithambile futhi elithokomele ikhoyili ehlume umatilasi ophindwe kabili omaphakathi oqinile oqinile phezulu.
Yasungulwa eminyakeni edlule, uRayson ungumkhiqizi ochwepheshile futhi ungumnikezeli onekhono eliqinile ekukhiqizeni, ekuklameni, naku-R&D. vispring baronet superb Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze sikhonze amakhasimende kuyo yonke inqubo kusukela ekwakhiweni komkhiqizo, i-R&D, kuye ekulethweni. Siyakwamukela ukuthi usithinte ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nomkhiqizo wethu omusha i-vispring baronet superb noma inkampani yethu.Lo mkhiqizo uphefumula kakhulu. Izindwangu zayo zivumela umoya ukuba uhambe ngokukhululekile futhi umswakama ukhishwa ngokushesha, okudala indawo yokuphefumula.